Agromart | Agricultural Marketplace Nepal बंगुर पाल्ने तरिका – Agromart
बंगुर पाल्ने तरिका
Q 1. बंगुरको हैजा (Swine Fever) को उपचार के हुन्छ ?
Q 2. खोरेत रोगको उपचार रोकथाम के हुन्छ ?
Q 3. के बंगुरलाई खोरेत रोग पनि लाग्छ ? लक्षण के हुन्छ ?
Q 4. भ्यागुते रोगको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 5. बंगुरलाई भ्यागुते रोग लाग्दा कस्तो लक्षण देखाउंछ ?
Q 6. बंगुर विरामी भएमा कस्तो लक्षण देखाउंछ ?
Q 7. होटलको बासी फालिएका खानेकुराहरु पनि दानाको रुपमा प्रयोग हुन सक्छ ?
Q 8. बंगुरको आहारामा हरियो घांस पनि समावेश हुन सक्छ ?
Q 9. एउटा बयस्क पोथी बंगुरलाई कम्तिमा कति सन्तुलित दाना आवश्यक पर्छ ?
Q 10. बंगुरको लागि आवश्यक सुन्तलित दाना फार्ममा नै तयार गर्न सकिन्छ ?
Q 11. कोरेली पोथी बंगुरलाई कुन उमेरबाट प्रजनन योग्य मानिन्छ ?
Q 12. प्रजननको लागि छानिने पोथी बंगुरमा कस्तो गुण हुनु पर्छ ?
Q 13. प्रजननको लागि भाले बंगुर कस्तो हुनु पर्छ ?
Q 14. पाख्रिवास कालो बंगुर स्थानीय च्वाचे हुर्रा भन्दा के मा राम्रो छ ?
Q 15. धराने कालो बंगुर भनेको कुन जातिको बंगुर हो ?
Q 16. बंगुरमा कृत्रिम गर्भाधान गर्दा व्याड खोजेको कुन समयमा गराउने ?
Q 17. के बंगुरमा कृत्रिम गर्भाधान गरिन्छ ?
Q 18. वीर व्याड खोजेको माउलाई वीर लगाउने उत्तम समय कुन हो ?
Q 19. बंगुरको माउ/भुनी, कोरेली पोथीले वीर व्याड खोजेको वा ऋतुकालमा आएको बेलाको लक्षण कस्तो हुन्छ ?
Q 20. बंगुरको माउलाई थुनेलो रोग (Mastitis) पनि लाग्छ ?
Q 21. बंगुरलाई पिउने पानी कस्तो समयमा कति आवश्यक हुन्छ ?
Q 22. दिनमा कति पल्ट दाना दिनु राम्रो हुन्छ ?
Q 23. व्याएको माउ बंगुरलाई आहारा दाना के हिसाबले दिनु पर्छ ?
Q 24. पाठा/पाठीलाई माउबाट कती हप्ता भएपछि छुट्टै राख्दा हुन्छ ?
Q 25. पाठा/पाठीलाई माउको दूध साथै दाना पदार्थ कहिलेबाट दिनु पर्छ ?
Q 26. कुन उमेरको भाले पाठोलाई खसी पार्न राम्रो हुन्छ ?
Q 27. के बंगुरको पाठा/पाठीको पुच्छर पनि काट्नु पर्छ ?
Q 28. बंगुरको पाठा/पाठीहरुलाई पहिचानको लागि नम्बर कसरी लगाउन सकिन्छ ?
Q 29. पाठा / पाठीलाई रक्त अल्पताको रोगबाट कसरी बचाउने ?
Q 30. बंगुरको पाठा / पाठीको दांत काट्नु पर्छ भनिन्छ के हो ?
Q 31. बंगुरको पाठा/पाठीको नाईटो काट्ने भनेको के हो ?
Q 32. साना पाठा / पाठीलाई विगौती दूध कति दिने ?
Q 33. ब्याउने बंगुरको माउलाई कसरी व्यवस्थपन गर्ने ?
Q 34. बंगुरपालनमा फोस्टरिङ्ग (Fostering) भनेको के हो ?
Q 35. बंगुरपालनमा जैविक सुरक्षको व्यवस्था कसरी गर्ने ?
Q 36. कस्तो प्रकारको तालीमहरु पाईन्छ बंगुरपालन सम्बन्धमा ?
Q 37. बंगुरपालन कार्यको लागि तालीम एवं अन्य सहयोग लिन कहां सम्पर्क गर्ने ?
Q 38. व्याउने वेला भएको माउको हेर विचार कसरी गर्ने ?
Q 39. वंगुरको गोठ/ खोरको दुर्गन्ध नियन्त्रण कसरी गर्ने ?
Q 40. वंगुर पालन गर्ने खोरमा दाना खुवाउने/दिने भाडा वा ठाउँ कस्तो हुनु पर्छ ?
Q 41. वंगुरको लागि नमुना गोठ निर्माण गर्न के गर्नु पर्ला ?
Q 42. व्याउने माउ र वच्चासंगै राख्नु हुन्छ ?
Q 43. वंगुरको खोर/गोठ निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु के के हुन ?
Q 44. वंगुरको मलमुत्रबाट गोवर ग्याँस निकाल्न सकिन्छ ?
Q 45. वंगुर पालनमा लागेका किसानले सरकारी सहयोग कसरी पाउछ ?
Q 46. वंगुरको गर्भ अवधि कति दिनको हुन्छ ?
Q 47. मासुको लागि पालिने वंगुर पनि त्यस्तै छिटो वढ्छ त ?
Q 48. एक वर्षमा एउटा माउ वंगुरले कति पल्ट व्याउछ ?
Q 49. एउटा माउ वंगुरले कति वटा सम्म पाठा / पाठी पाउछ ?
Q 50. अहारालाई मासुमा परिवर्तन गर्ने क्षमता अन्य पशु भन्दा वंगुरमा राम्रो हुन्छ भन्छन के हो ?
Q 51. नेपालमा फस्टाएका वंगुरको उन्नत जातहरु के के हुन ?